DF Somalia oo sii adkeysay shuruudaha diyaaradaha Kismaayo u duulaya | Xaysimo
Home War DF Somalia oo sii adkeysay shuruudaha diyaaradaha Kismaayo u duulaya
DF Somalia oo sii adkeysay shuruudaha diyaaradaha Kismaayo u duulaya
Hey’adda duulista Rayidka Soomaaliyeed SCAA ayaa soo saartay amar ah in Shirkad kasta oo u duuleysa Kismaayo inay soo weydiisato Xafiiska Hey’adda fasax duulimaad 24 saac ka hor.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Hey’addu soo saartay Foom fasax ah oo laga buuxinayo Shirkadaha Diyaaradaha ee aadaya Kismaayo.
Wufuud kala duwan ayaa la filayaa inay gaaraan Magaalada Kismaayo ee Caasimadda Jubbaland si ay uga qeyb galaan Caleema saarka Madaxweyne Axmed Madoobe oo dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha 4-ta sano soo socoto ee Jubbaland, waxaana la rumeysan yahay inuu amarkaan yahay mid lagu joojinayo wufuudaas.
Xafladda Caleema saarka Axmed Madoobe ayaa waxaa lagu casuumay madax kala duwan oo horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya, waxayna Dowladda ku dadaaleysaa sidii ay u cunaqabateyn laheyd Caleema saarkaas.
Maalmihii ugu dambeeyay degaanada maamulka Jubbaland waxaa ka taagnaa walaac xooggan oo ka dhashay cunaqabateynta dowladda Soomaaliya ay saartay Garoonka Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa horey ugu hanjabay inuu qaadan doono go’aano culculus haddii aysan Dowladda Federaalka ah joojin cadaadiska ay ku heyso Maamulkiisa kadib shir jaraa’id oo uu ku qabtay Magaalada Kismaayo.